surah 62 Archives - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
casharada More in Soomaali
Tag: surah 62
Suuradda 62 (Jameecada, Jimcaha – Al-Jumcah) waxay noo sheegaysaa in maalinta salaadda ee muslimiintu ay tahay Jimco. Laakiin Suuradda al-Jumu’ah ayaa marka hore bixinaysa caqabad – taasoo uu Ciise ku aqbalay doorkiisa Masiixinimo. Al-Jumu’ah, wax yar uun ka hor intaan la soo saarin maalinta salaadda oo Jimce noqonaysa, wuxuu caddeeyay:
6 Waxaad dhahdaa (Nabiga) kuwa Yuhuuda ahow haddaad sheegateen inaad tihiin Awliyo Eebe dadka kale ka sokow, geeri jeelaada haddaad run sheegaysaan. 7 Geerina ma jeelaanayaan weligood waxay hormarsadeen (oo gaf ah) dartiis, Eebana waa ogyahay kuwa daalimiinta ah.
Suuradda 62 al-Jumu’ah: 6-7
Aayadhaa ku jirta Suuradda al-Jumcah waxay la macno yahiin in haddii aynu saaxiibo run ah la nahay Ilaah markaa aan ka cabsi qabin geeri. Laakiin maadaama iyagu (iyo anaguba) aan shaki ka qabno sida wanaagsan ee camalkeennu u shaqeyno ayaan uga fogaaneynaa dhimashada qiimaha badan. Laakiin Jimcadan, Maalinta 6 ee toddobaadkiisii ​​ugu dambeeyay, isagoo Yuhuudi ah, Ciise Masiix wuxuu wajahay imtixaankan saxda ah – wuxuuna ku sameeyay isagoo ku bilaabay salaadda. Sida ku qoran Injiilka oo u sharaxayo Masiixa:
7 Oo wuxuu watay Butros iyo labada wiil oo Sebedi, oo wuxuu bilaabay inuu calool xumaado oo tiiraanyoodo.
38 Markaasuu ku yidhi, Naftaydu aad bay u calool xun tahay tan iyo dhimasho; halkan jooga oo ila soo jeeda.
39 Waxoogaa ayuu hore u socday, oo wejigiisuu u dhacay oo tukaday isagoo leh, Aabbow, hadday suurtowdo, koobkanu ha i dhaafo, hase ahaatee, yaanay noqon sidaan doonayo laakiin sidaad doonaysid ha noqoto.
Mataayoos 26: 37-39
Kahor intaanan sii wadin dhacdooyinka Jimcaha, waxaan dib u eegi doonnaa dhacdooyinkii ka horeeyay salaadda Jimcaha. Cadawgeena cadawsan, Shaydaan, wuxuu galay Yuudas Maalintii 5 si uu u gacangaliyo Ciise Masiix. Fiidnimadii xigtay maalintii 6aad Ciise wuxuu xertiisii la wadaagay cashadiisii ​​ugu dambaysay. Cuntadaas wuxuu ku sharaxay tusaale ahaan iyo barid sidii aan isu jeclaan lahayn iyo jacaylka weyn ee Eebbe noo qabo. Sida saxda ah ee uu tan ku sameeyay waxaa halkan lagu sharaxayaa Injiil. Kadib wuxuu u duceeyay dhammaan mu’miniinta – oo aad ka akhrisan karto halkan.
Injiilku wuxuu sharaxayaa wixii xigay salaaddiisii Jimcaha kadib:
Ka soo qabashadii Beerta
iise markuu waxyaalahaas yidhi wuu la baxay xertiisii oo kala gudbay Tog Qidroon, meeshay ku tiil beer uu galay, isaga iyo xertiisiiba.
Yooxanaa 18: 1-13
Nebigu wuxuu tegey beertii Yeruusaalem ka baxsaneey si uu ugu soo tukado. Halkaas ayaa Yuudas keenay askar inay qabtaan. Haddii aan ku wajahno xarig waxaan isku dayi karnaa inaan dagaalno, ordo ama aan dhuunto. Laakiin Ciise Masiix ma uusan dagaallamin mana cararin. Wuxuu si cad u qirtay inuu runtii yahay Ciisahay raadinayeen. Qirashadiisa cad (“Anigu waxaan ahay isaga”) ayaa argagax gelisay askarta iyo saaxiibbadiis way baxsadeen. Nebigu wuu gudbiyay in la xiro waxaana loo kaxeeyay guriga Annas si su’aalo loogu weydiiyo.
Su’aalahii Ugu Horeeya
Injiil wuxuu qorayaa sida nebiga halkaas su’aalo loogu weydiiyay:
Yooxanaa 18: 19-24
Ciise Masiix waxaa laga soo diray wadaadki hore ee sare Waxaana loona diray wadaadka sare ee sanadkaas inuu weydiiyo su’aasha labaad.
Halkaas oo ahayd horjoogayaasha oo dhan hortooda ayaa lagu weydiin . Injiil wuxuu qorayaa su’aalahan dheeraad ah:
Markoos 14: 53-65
Hoggaamiyayaashii Yuhuudda ayaa dil ku xukumay Ciise Masiix. Laakiin Yuurasalem waxaa xukumi jiray Roomaanka, xukun dil waxaa kaliya oo ogolaan kara Gudoomiyaha Rooma. Markaasay Ciise u geeyeen taliyihii Roomaanka ee Bontiyos Bilaatos. Injiilka waxa kale oo uu qorayaa wixii isla wakhtigaas ku dhacay Yuudas Iskariyod, kii gacangeliyey.
Maxaa ku dhacay Yuudas kii gacangeliyey?
oortii aroortii la gaadhay wadaaddadii sare iyo waayeelladii dadka oo dhan ayaa Ciise wax ka gees ah ka wada hadlay si ay u dilaan.
2 Markaasay xidheen oo kaxeeyeen, oo waxay u dhiibeen taliyihii Bilaatos ahaa.
3 Markaas Yuudas, oo ahaa kii gacangeliyey, goortuu arkay in la xukumay, ayuu isqoomameeyey, oo soddonkii gogo’ oo lacagta ahaa ayuu wadaaddadii sare iyo waayeelladii ku celiyey,
4 oo wuxuu ku yidhi, Waan dembaabay markaan gacangeliyey dhiig eed la’. Laakiin waxay ku yidhaahdeen, Maxaa noogu jira? Yeelkaa.
5 Markaasuu lacagtii macbudka gudihiisa ku daadshay oo ka tegey, wuuna baxay oo isdeldelay.
6 Kolkaasaa wadaaddadii sare lacagtii qaadeen oo waxay yidhaahdeen, Xalaal ma aha in khasnadda quduuska ah lagu rido, waayo, waa dhiig iibkiis.
7 Markaasay ka wada hadleen oo waxay ku iibsadeen dhulka dheriyasameeyaha in shisheeyaha lagu aaso.
8 Sidaa darteed ilaa maanta dhulkaas waxaa loogu yeedhaa dhulkii dhiigga.
Mataayoos 27: 1-8
Ciise Masiix waxaa suaalo weydiiyay Gudoomiyahii ama Badhasaabkii Roomaanka
11 Ciise wuxuu hor istaagay taliyaha, oo taliyihiina waa weyddiiyey oo ku yidhi, Ma Boqorkii Yuhuudda baad tahay? Ciisena wuxuu ku yidhi, Waad tidhi.
12 Goortii wadaaddadii sare iyo waayeelladii ay ashtakeeyeen, waxba uma uu jawaabin.
13 Markaasaa Bilaatos ku yidhi, Miyaanad maqlaynin waxa badan oo ay kugu marag furayaan?
14 Laakiin uguma uu jawaabin xataa eray keliya, sidaa darteed taliyihii ayaa aad ula yaabay.
15 Taliyihii waxaa caadadiisu ahayd inuu iidda dadka u sii daayo maxbuuskay doonayaan.
16 Markaasay waxay lahaayeen maxbuus caan ah oo la odhan jiray Baraabbas.
17 Haddaba goortay isu urureen, Bilaatos ayaa ku yidhi, Iyamaad doonaysaan inaan idiin sii daayo? Baraabbas ama Ciise kan Masiixa la yidhaahdo?
18 Waayo, wuxuu ogaa inay hinaaso ugu soo dhiibeen.
19 Kolkuu kursiga xukumaadda ku fadhiistay ayaa naagtiisii farriin u soo dirtay oo waxay ku tidhi, Ha dhex gelin xaajada ninkaas xaqa ah, waayo, maanta anigoo ku riyoonaya isaga, ayaan aad iyo aad u xanuunsaday.
20 Laakiin wadaaddadii sare iyo waayeelladii waxay dadkii badnaa oggolaysiiyeen inay Baraabbas weyddiistaan, Ciisena la dilo.
21 Laakiin taliyihii ayaa u jawaabay oo ku yidhi, Labadooda kee baad doonaysaan inaan idiin sii daayo? Waxay yidhaahdeen, Baraabbas.
22 Markaasaa Bilaatos wuxuu ku yidhi, Haddaba maxaan ku sameeyaa Ciise kan Masiixa la yidhaahdo? Kulligood waxay wada yidhaahdeen, Iskutallaabta ha lagu qodbo.
23 Oo wuxuu yidhi, Waayo, waa maxay sharkuu falay? Laakiin aad bay u sii qayliyeen oo yidhaahdeen, Iskutallaabta ha lagu qodbo.
24 Bilaatos goortuu arkay inuusan waxba ka tari karin in rabshad kacdo maahee, ayuu biyo qaatay oo dadka hortooda ku gacmo dhaqday oo wuxuu yidhi, Anigu waan ka eedla’ahay ninkan xaqa ah dhiiggiisa. Idinku yeelkiinna.
25 Dadkii oo dhammu waa wada jawaabeen oo yidhaahdeen, Dhiiggiisu annaga iyo carruurtayadaba ha dul saarnaado.
26 Markaasuu Baraabbas u sii daayay, oo goortuu Ciise karbaashay ayuu u dhiibay in iskutallaabta lagu qodbo.
Mataayoos 27: 11-26
Iskutallaabta, Geerida & Aaska Ciise Masiix
Injiilka ama KQ wuxuu si faahfaahsan u diiwaan geliyaa sidii Ciise Masiix iskutallaabta loogu qodbay. Sida ku qoran:
27 Markaasaa taliyaha askartiisii waxay Ciise geeyeen guriga taliyaha, oo waxay isaga ku soo ururiyeen askartii oo dhan.
28 Dharkiisii ayay ka qaadeen oo waxay u geliyeen dhar guduudan.
29 Markaasay taaj qodxan uga taxeen oo madaxiisay saareen, cawsduurna gacantiisa midigtaa ayay u geliyeen, oo intay hortiisa jilba joogsadeen oo ku majaajiloodeen ayay waxay ku yidhaahdeen, Nabad, Boqorka Yuhuuddow.
30 Wayna ku candhuufeen, markaasay cawsduurkii ka qaadeen oo madaxay kaga dhufteen.
31 Oo goortay ku majaajiloodeen dabadeed ayay dharkii ka qaadeen oo dharkiisii bay u geliyeen, markaasay wadeen in iskutallaabta lagu qodbo.
32 Goortay soo baxeen, waxay arkeen nin reer Kuranaya ah oo Simoon la odhan jiray, kan ay ku qasbeen inuu iskutallaabtiisa u qaado.
33 Oo goortay yimaadeen meel Golgota la odhan jiray, tan la yidhaahdo meeshii dhakada,
34 waxay siiyeen inuu cabbo khamri xammeeti lagu daray, goortuu dhadhamiyeyse wuu diiday inuu cabbo.
35 Oo goortay iskutallaabta ku qodbeen, dharkiisay qaybsadeen, wayna saami riteen si wixii nebigu ku hadlay u noqdaan, Dharkaygii bay qaybsadeen oo maradaydii bay saami u riteen.
36 Meeshaasna ayay fadhiisteen oo dhawreen.
37 Waxay meel madaxiisa ka korraysa ku qoreen ashtakadii lagu ashtakeeyey oo leh, KANU WAA CIISE BOQORKA YUHUUDDA.
38 Markaasaa waxaa iskutallaabo lagu la qodbay laba tuug, mid midigta, midna bidixda.
39 Kuwii ag marayayna waa caayeen, oo intay madaxooda luleen,
40 waxay yidhaahdeen, Kaaga macbudka duminayow oo saddex maalmood ku dhisayow, isbadbaadi, haddii aad tahay Wiilka Ilaah, oo iskutallaabta ka soo deg.
41 Sidaas oo kale ayaa wadaaddada sare ugu majaajiloodeen, iyaga iyo culimmada iyo waayeelladaba, oo waxay yidhaahdeen,
42 Kuwa kale ayuu badbaadiyey, qudhiisa isma badbaadin karo. Waa Boqorka Israa’iil; haddeer iskutallaabta ha ka soo dego, annaguna waannu rumaysan doonnaaye.
43 Ilaah buu isku halleeyey, haddeer ha bixiyo hadduu isaga ku faraxsan yahay, waayo, wuxuu yidhi, Waxaan ahay Wiilka Ilaah.
44 Tuugaggii iskutallaabaha lagu la qodbayna sidaas oo kale ayay u caayeen.
45 Hadda saacaddii lixaad ilaa saacaddii sagaalaad dhulka oo dhammu gudcur buu ahaa.
46 Abbaaraha saacaddii sagaalaad Ciise ayaa cod weyn ku dhawaaqay oo yidhi, Eloy, Eloy, lama sabakhtani, waxaa weeye, Ilaahayow, Ilaahayow, maxaad ii dayrisay?
47 Kuwa halkaas taagnaa qaarkood ayaa goortay maqleen, yidhi, Kanu wuxuu u yeedhayaa Eliyaas.
48 Kolkiiba midkood baa orday oo qaaday geed isbonji la yidhaahdo, oo khal uga soo buuxshay, oo intuu cawsduur saaray ayuu siiyey inuu cabbo.
49 Kuwa kale ayaa yidhi, Daaya aynu aragnee inuu Eliyaas yimaado oo badbaadiyo.
50 Markaasaa Ciise goortuu mar kale cod weyn ku dhawaaqay, ruuxii bixiyey.
51 Oo bal eeg, daahi macbudka ayaa kor ilaa hoos laba u kala dillaacay, dhulkiina waa gariiray, dhagaxyadiina waa kala dildillaaceen.
52 Xabaalihiina waa furmeen, oo quduusiin badan oo hurdayna meydadkoodii waa la kiciyey.
53 Sarakiciddiisa dabadeed ayay xabaalaha ka soo baxeen, oo waxay galeen magaalada quduuska ah, oo waxay u muuqdeen dad badan.
54 Boqol-u-taliyihii iyo kuwii la jiray oo Ciise dhawrayay, goortay arkeen dhulgariirkii iyo wixii dhacay, aad bay u baqeen oo yidhaahdeen, Runtii, kanu wuxuu ahaa Wiilkii Ilaah.
55 Waxaana halkaas joogay dumar badan oo meel fog ka eegayay, kuwii Ciise ka soo raacay Galili oo u adeegi jiray isaga,
56 oo waxaa ku dhex jirtay Maryantii reer Magdala, iyo Maryan oo ahayd Yacquub iyo Yoosee hooyadood, iyo wiilashii Sebedi hooyadood.
Mataayoos 27: 27-56
Injil wuxuu qeexayaa ruxmasahdii dhulka, Burburkii dhagaxyada , iyo qabriyada la furayo xilligii uu Ciise dhintay isla sharaxaad la mid ah suuradda Az-Zalzalah (Suuradda 99 – Dhulgariirkii)
Dhulkuna soo bixiyo culaykiisii wixii ku aasnaa. 3 Dadkuna (Gaaladuna) dhahaan maxay leedahay. 4 Maalintaas waxay ka sheekayn warkeeda. 5 Maxaayeelay Eebaa u waxyooday. 6 Maalintaas Dadku way soo bixi iyagoo kala tagsan (xagga Diinta iyo Camalkaba) si ay u arkaaan camalkooda.
Suuradda Az-Zalzalah 99: 1-6
Suuradda Az-Zalzalah waxay cadeeynaysaa maalinta xisaabta. Faahfaahintii geerida Ciise Masiix u dhigantaa Az-Zalzalah oo Calaamad u ah in dhimashadiisa oo ahayd Bixintiii lagama maarmaanka ahayd ee Maalintaas Imaatinkiisa ah.
Dhiniciisa ‘la muday’
Injiilka Yooxanaa wuxuu si faahfaahsan uga hadlayaa iskutallaabta dusheeda. Waxana qoran sidan:
Yooxanaa wuxuu arkay askarta Roomaanka oo waran oga mudaya ama wareemaya dhinaca Ciise Masiix. Waxaana ka soo baxay dhiig iyo biyo la kala saaray, taasoo muujineysa inuu Ciise u dhintay wadnaha oo istaagay.
Injiil wuxuu qoray dhacdo kama dambays ah oo maalintaas – aaska. Sida ku qoran:
57 Goortay casarkii ahayd waxaa yimid nin reer Arimataya oo hodan ah oo Yuusuf la odhan jiray, oo isaguna Ciise xertiisa ahaa.
58 Kaasu wuxuu u tegey Bilaatos oo ka baryay Ciise meydkiisii. Markaasaa Bilaatos amray in loo dhiibo.
59 Yuusuf goortuu meydkii qaaday ayuu kafan nadiif ah ku duudduubay,
60 oo wuxuu geliyey xabaashiisii cusbayd, tan uu dhagax ka qoday, oo xabaashii afkeedii wuxuu ku soo giringiriyey dhagax weyn, wuuna ka tegey.
61 Oo halkaas waxaa joogay Maryantii reer Magdala iyo Maryantii kale, oo waxay fadhiyeen meel xabaashii ka soo hor jeedda.
Mataayoos 27: 57-61
Maalinta 6 – Jimce wanaagsan
Maalin kasta kalandarka Yuhuudda wuxuu bilaabmaa qorrax dhaca. Sidaas darteed maalintaas 6 ee toddobaadku wuxuu ku bilaabmay inuu Ciise cashadiisii ​​ugu dambaysay la wadaago xertiisa. Maalintaas aakhirkeedna waa la qabtay, marar badan ayaa la soo taagay maxkamad, iskutallaabta lagu qodbay, warana waa lala dhacay, lana aasay. Maalintan waxaa badanaa loo yaqaan ‘Jimce Wanaagsan’. Taasi waxay keeneysaa su’aasha ah: Sidee maalin khiyaano, jirdil iyo geeri Ciise weligeed loogu tilmaami karaa ‘wanaagsan’? Maxaa Jimcadda Wanaagsan loogu bedeli waayay ‘Jimca Xun’ ama loo dooran waayey?
Tani waa su’aal weyn oo aan uga jawaabno adoo sii wadaya xisaabta Injil maalmaha soo socda. Laakiin tilmaan ayaa laga helayaa waqtiga haddii aan ogaanno in Jimcadan ay ahayd maalinta barakaysan ee Nisan 14, isla maalintaas Kormaridda ah ee Yuhuuddu ay u bixiyeen wan si ay uga samatabbixiyaan dhimashada Masar 1500 sano ka hor.
Maalinta 6- Jimco-oo ahayd todobaadkii ogu dambeeysay ee Ciise masiix noloshiisa wuxuu bar bar dhigay xeerarkii ka soo baxay towered
Inta badan xisaabaadka raggu waxay soo gabagabeeyaan geeridooda, laakiin Injilku wuu sii socdaa sidaa daraadeed waxan fahmi karnaa sababta maalintan weligeed loogu malayn karo inay tahay Jimco Wanaagsan. Maalintii xigtay waxay ahayd Sabti – Maalin 7.
Laakiin marka hore aan ku noqonno Suuradda Al-Jumca, innagoo ka sii wadnay aayadaha aan soo barannay.
Say death from which you flee will surely meet you, then you shall be brought back to the Knower of the Invisible and the Visible, and tell you (the truth of) what you did.Kuwa xaqa rumeeyow! Marka la dhawaaqo Salaadda Jimcaha (Maalinta Cibaadada) dhaqso u aada xuska Eebe, iskana taga ganacsiga, saasaa idiin khayr roon haddaad wax ogtihiin.
Suuradda 62 =al-Jumca: 8-9
Ciise Masiix, isagoo qaadanaya loolanka Ayat 6 & 7 ee suuradda al-Jumca, kama cararin geerida, laakiin wuxuu kubilaabay salaada inuu wajahay imtixaan weyn, isagoo cadeynaya inuu ahaa ‘saaxiibka Ilaah’. Markaa miyaanay haboonayn, in lagu xasuusto geesinimadiisa, muslimiinta la faray inay maalinta jimcaha maalinta salaadda ah? Waxay u egtahay in ilaahay uusan rabin inaan ilaawno adeegii Masiix.
Author [email protected]Posted on 21/11/2020 06/03/2021 Categories Injiilka shaaca ka qaadayTags aaska isa al masih, dhacdooyinkii jimce wanaagsan, geerida isa al masih, geerida looma baxsan karo, geerida yaxya iscario, isa al masih iskutallaabta laguma qodbay, isa al masih oo la aasay, iskutallaabta ciise al masih, jimce tukada, maxaa dhacay jimce wanaagsan, salaada jimcaha, surah 62, suurat al-Jumu'ahLeave a comment on Maalinta 6-Ciise Masiix iyo Jimco wanaagsan
eMasiixa ayaa lagu muujiyay - xagga Baristiisa Awoodda leh
Ciise Masiix wuxuu bixiyaa 'Biyaha Nolosha'
Ciise Masiix wuu ' Xajiyay
Ciise Masiix wuxuu ku dhawaaqay Jihaad - qaab yaab leh, ee cadaawe kala duwan, waqtiga saxda ah
Ku rukunso Qolka Blog la adeegsanaayo Email
Dhageeyso heeso soomaali ah
Injiilka oo ku qoran af-soomaali Proudly powered by WordPress